Faka usetyenziso lwekhamera zikaGoogle ngoku kwi-Galaxy S9 / Qaphela9 nge-UI enye | I-Androidsis
Uyifumana njani ikhamera yeGoogle Pixel kwiGalaxy S9 yakho okanye kwiNqaku 9 nge-UI enye
Abo banayo bafudukele kwi-UI enye kwi-Galaxy S9 okanye Qaphela 9, ngokuqinisekileyo oko ndilahlekile ikhamera yeGoogle Pixel kunye nezo foto zimangalisayo iyenza kwi-HDR +. Ngethamsanqa, iDan, umphuhlisi owenza izibuko kuhlobo lwe-Exynos ye-Galaxy S9 enokwenzeka, upapashe uhlaziyo olukuvumela ukuba usebenzise ikhamera yeGcam okanye uGoogle.
Okwangoku, ngokungafaniyo nale nguqulo inye yeGPS S9 kwi-Android 8.0 Oreo, ungasebenzisa ukuhamba kancinci kwekhamera kaGoogle ukurekhoda kwi-120 okanye kwi-240FPS. Insiza ephucula kakhulu umgangatho weefoto ozithathayo ngeNqaku lakho le-9 okanye i-S9 kwezi ntsuku apho sifuna ukuba ikhamera yethu iziphathe kakuhle.
1 Ukuthatha ingqalelo kwesi sibuko
2 Uyifumana njani ikhamera yeGoogle Pixel
3 Ukuqwalasela into encinci
Ukuthatha ingqalelo kwesi sibuko
Ngokuqinisekileyo uyazibuza ukuba ungayisebenzisa na indlela yokujonga ebusuku, besithetha nzulu kwezi ntsuku zigqithileyo, kunye nolu hlaziyo lweGcam yeGalaxy S9 kunye neNqaku 9 kwi-UI enye. Kufuneka sitsho ukuba okwangoku ayifumaneki, kodwa ewe uArnova, omnye umphuhlisi owaziwayo we-XDA Developers, isebenza ngokubambisana ne-iDan, umdali wale nguqulo esithetha ngayo namhlanje.
Kusenokwenzeka Ayizukuthatha ixesha elide ukuba nezibuko lekhamera kaGoogle Pixel 3 eziza kubandakanya ujongano olutsha, imowudi yokujonga ebusuku, imowudi yemizobo kunye nemowudi ekhethekileyo ye-HDR +. Asiziqondi ezinye izinto eziza kufika, kuba ngoku zijolise ekwenzeni ikhamera yangaphambili isebenze ukuze isebenzise imo yomzobo.
Siza kukugcina unolwazi ngenkqubela phambili kunye nohlobo oludibeneyo lwePixel 3 kunye nale misebenzi mihle. Okwangoku sishiyeke kakhulu iDan isebenza kuGoogle camera. Nantsi into esebenzayo:
Imowudi yemizobo kunye ne-HDR + kwikhamera esemva
Ikhamera yangaphambili iyasebenza, kodwa ulibale nge-HDR okanye imo ye-portrait okwangoku.
Ukuhamba kancinci kusebenza kuzo zombini iiFPS ze120 kunye neeFPS ezingama-240.
Uyifumana njani ikhamera yeGoogle Pixel
Los iimfuno ukuze ukwazi ukusebenzisa eli zibuko Zizo zilandelayo:
I-UI enye ene-Android Pie kwi-Galaxy S9 okanye kwi-Galaxy Note 9.
Ngoku siza kuyikhuphela:
Layisha: Ikhamera kaGoogle Pixel kwi-UI enye kwi-Galaxy S9 okanye kwiNqaku 9.
Uyenza njani imo ye-HDR:
Into yokuqala ukuyivula emva kokuyifaka.
Si yiya kwi «Useto» ukusuka kwiqela lenjongo ukuhamba ecaleni.
Sibuyela umva kwaye siyavala isicelo.
Siyiqala kwakhona kwaye siza kubona ukuba indlela ephuculweyo ye-HDR + yePixel sele isebenza.
Ukuqwalasela into encinci
Njengomgangatho, sele iqulunqiwe ukuze ukwazi ukuthatha imifanekiso yomgangatho omkhulu. Nangona sinako Sebenzisa ukuvulwa kweGPS S9 ngomsebenzi wokuvula ukuya ku-2.4. Olu khetho luyacetyiswa, nangona lungeyomfuneko, ukufumana ukucaca ngakumbi kwiifoto ngokukhanya okuninzi okanye ngexesha lasemini. Ukuba sele sizokuthatha ukukhanya ekukhanyeni okuphantsi okanye ebusuku, kuyacetyiswa ukuba usebenze olu khetho kuseto lweGcam.
Kwaye sinayo kwakhona kwi-UI enye usetyenziso olumangalisayo lwe Ikhamera kaGoogle for thatha imifanekiso emihle Uluhlu olukhulu lwamandla kunye nokugxininisa ngokuchaseneyo. Inyaniso kukuba xa uqhele ukuyisebenzisa, awunakho ukusebenzisa enye; Nokuba i-app yekhamera ye-Samsung ishiywe ecaleni kwezinye iinjongo, njengokuthatha ifoto ekhawulezayo ngokucofa kabini iqhosha lamandla.
Ngoku sinomonde omncinci wokukwazi Imowudi yemizobo ngaphambiliNjengakwiGlass S8, imowudi yokujonga ebusuku kunye nemowudi ye-HDR + nayo iyasebenza kwiiselfie, kuba ngokudibeneyo nemowudi yemizobo, kuyenziwa ngokumangalisayo okanye kwiiselfies ezikumgangatho ophezulu.
Ukuba ufuna ukunika inqaku elongezelelweyo lomgangatho kwiifoto zakho, ngekhamera efanayo nePixel 3, okanye ukuba abanye abahlobo bakubuza ukuba uthathe loo foto ngeDSLR, sele uyithatha faka usetyenziso lwekhamera kaGoogle efakwe yiDan.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyifumana njani ikhamera yeGoogle Pixel kwiGalaxy S9 yakho okanye kwiNqaku 9 nge-UI enye
Enkosi kakhulu kodwa khange ndikwazi ukuthatha iifoto, ngokucacileyo umcu kodwa andiwuboni kwigalari okanye ndiwujonge kwangaphambili. Iividiyo zigciniwe
UGoogle uqinisekisa ukuba akukho lutshintsho kumgaqo-nkqubo wohlaziyo lwe-Android One
Ngaba kufanelekile ukuthenga i-Android ephezulu ekupheleni kweminyaka emibini edlulileyo?